‘लम्फू’को ट्रेलरमा वेरोजगार यूवाको कथा, ‘तरकारीवाली’को भूमिका के ? – mero sathi tv
‘लम्फू’को ट्रेलरमा वेरोजगार यूवाको कथा, ‘तरकारीवाली’को भूमिका के ?
On २९ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:५७
चलचित्र ‘लम्फू’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कमेडी, सस्पेन्स, पिडा, विछोडले भरिएको चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो ।
यो चलचित्र वैशाख २८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । चलचित्रलाई गोपालचन्द्र लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् भने शक्ति वल्दभ घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् । यो चलचित्रमा नव-नायक कविर खड्का, सलोन बस्नेत, नायिकाद्धय चाँदनी शर्मा र मरिष्का पोख्रेल, बाल-कलाकार कुशाग्र भट्टराई, कुशुम श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ ।
पपुलर मिडिया ग्रुपले निर्माण गरेको यो चलचित्रमा भूपतीको कथा, पटकथा तथा संवाद, रामजी लामिछाने र शिव वीकको कोरियोग्राफी, अष्ट महर्जनको एक्सन, अर्जुन पोखरेलको संगीत छ ।
चलचित्रको ट्रेलर सामान्य छ । तर, यसले उठान गरेको बिषयले दर्शकको मन जित्न सक्छ । कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले सामान्य कथामा चलचित्र बनाएको भन्दै मन नपरे आफूलाई गाली गर्न आग्रह गरे । यस्तै, निर्माता शक्ति वल्दभले पनि आफूले कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दै चलचित्र मन नपरेको खण्डमा गाली गर्न आग्रह गरे ।
चलचित्रका मुख्य नायक कविर खड्काले यो चलचित्रका लागि आफूले धेरै मिहिनेत गरेको बताए । यस्तै, नायक सलोन बस्नेतले यो चलचित्रमा आफ्नो भूमिका यस भन्दा अगाडि गरेका भूमिका भन्दा धेरै फरक रहेको सुनाए । कलाकार कुशुम श्रेष्ठले आफ्नो विशेष भूमिका रहेको सुनाइन् । उनले, आफूले यो चलचित्र चलेपछि मात्र अरु चलचित्र गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने बताइन् ।
बिहेको निम्तो दिन नविना लामा पुगिन् बालुवाटार